South Africa: mkpochapụ nke ndị Negroes dị ka Peter Botha si "Ụzọ Peter Botha na ndị otu ya na ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị chemists, ndị ọcha na ndị ọcha na-emegide ndị ojii na 80 afọ"
Site na: KongoLisolona: Mee 25, 2019 00: 30 Enweghị asịsa
Ndị ọkà mmụta sayensị m achọpụtala ụzọ nke, site n'ịwụsa ngwaahịa kwesịrị ekwesị n'ime mmanya ha, na-eme ka nsị dị nwayọ na nsị zuru oke. Site n'inwe ihe ọṅụṅụ na ntinye ha, anyị nwere ike belata ọnụ ọgụgụ ha.
Ọgụ anyị maka ịdị n'otu gụnyere iji ụmụ agbọghọ ọcha na-acha ọcha maka iji nsi a na-egbu nwayọ nwayọ. Agha anyị abụghị banyere iji bọmbụ nuklia bibie Negro; anyị ga-eji ike anyị mee ihe maka nzube a. Ọ bụ ịrụ ọrụ nke ọma ịrụ ọrụ onye ọ bụla site na ya.
Dị ka a na-ekwu na nwa ojii na-anwụ mgbe ọ na-alakpu ụra na-acha ọcha, anyị nwere ohere pụrụ iche. Ndị anyị na-enwe mmekọahụ ga-apụ, na-apụ, na-eso ndị agha nke apartheid kwadoo ka ha na-eji nwayọọ eme ihe ha na-eme site n'ịnye nsí ahụ ajụjụ ma na-emebi imemume ndị a ndị ha ga-eme enyi.
Anyị na-emezigharị ndị ọchịagha nke ndị mmekọ nwoke na nwanyị site na iweta ndị ọcha bụ ndị ga-enwe ọrụ nke ịchụ ụmụ nwanyị ojii na-adịghị ike. "Peter Botha, President of the Republic of South Africa, Ihe si n'okwu ya kwuru August 18 1985 »
Ọkt28 07: 51